Gaari uu lahaa Xildhibaan Cali Cartan Bidaar oo lagu qarxiyay Muqdisho +SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Gaari uu lahaa Xildhibaan Cali Cartan Bidaar oo lagu qarxiyay Muqdisho +SAWIRRO
Gaari uu lahaa Xildhibaan Cali Cartan Bidaar oo lagu qarxiyay Muqdisho +SAWIRRO
Warar dheeraad ah waxa ayaa ka soo baxayaan qarax duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa oo ahaa nooca Dhejiska ayaa laggu xiray gaari nuuca aan xabada karin, kaasoo la sheegay inuu leeyahay Xildhibaan katirsan baarlamaanka maamulka Koofur Galbeed oo lagu magacaabo Cali Cartan Bidaar.
Saraakiil ka tirsan laamaha amaanka ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid xooggan uu ku geeriyooday wadihii gaariga, iyadoo xilliga gaariga qarxayay uusan saarneyn Xildhibaan Cali Cartan Bidaar.
Afar ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxa, kuwaasoo labo ka mid ah ay ahaayeen darawalada mooto bajaaj oo wadada marayay, xilliga qaraxa dhacayay, sidoo kale labo kale ayaa ku dhaawacantay oo saarnaa gaadiidka dadweynaha.
Wadihii gaariga ayaa ku dhintay qaraxa, waxaa la sheegayaa inuu ahaa askar ka tirsan ciidanka dowladda.
Qaraxa ayaa la tuhusan yahay in lagu xiray gudaha gaariga, gaar ahaan kursiga darawalka, waxaana ka dhashay su’aalo fara badan sida ay u suura gashay in gaadiid kuwa aan xabadaha karin in gudihiisa qarax loogu xiro,
Shalay ayay aheyd markii sidan oo kale gaari Booliska uu lahaa lagu xiray qarax, waxaana ku dhintay Sarkaal lagu magacaabayay Xasan Dheere.
Previous articleMusaveni oo Farmaajo kula taliyay inuu cidan beeleed samaysto
Next articleDAAWO Siyaasiyinta xanuunsan iyo siyaasiyiinta caraysan ayaa bulshada jah warerinaya
Mas uul sare oo reer Puntland ah oo galkacyo lagu dilay
Raggii ka dambeeyay Qaraxii Hotel Saxafi oo xukun dil ah lagu...